२०७७ माघ १४, बुधबार
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेष्टर युनाईटेडलाई हराउँदै पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले जित निकालेको छ । बुधबार राति समूह एचको खेलमा पीएसजीले घरेलु टोली म्यान्चेष्टर युनाईटेडलाई २–१ ले पराजित गरेको हो ।
पीएसजीको जित ब्राजिली स्टार नायक रहे । उनले दुई गोल गरे । थप एक गोल मार्कुन्होसको नाममा रह्यो । युनाईटेडका लागि मार्कुस रासफोर्डले एक गोल फर्काए ।
खेलको छैटौ मिनेटमा नेयमारले पीएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए । रासफोर्डले गोल घरेलु टोलीका लागि गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
मार्कुन्होसले ६९ औं मिनेटमा पीएसजीलाई २–१ ले अघि बढाए । लगत्तै खराब ट्याकल गरेको भन्दै युनाईटेडका फ्रेड रातो कार्ड खादै मैदान बाहिरिए । अन्तिम ३० मिनेट युनाईटेडले १० खेलाडीमा सिमित बनेको खेलेको थियो ।
दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा नेयमारले गोल गर्दै युनाईटेडविरुद्ध सहज जित निकाल्न सफल भए ।
सोही समूहको अर्को खेलमा जर्मनको आरबी लाईपेजिगले ईस्तानबुल बासाकेशिरमाथि ४–३ को जित निकालेको छ । समूह चरणको पाँचौ खेलमा तीन अंक बटुल्दै बुन्डेसलिगा क्लबले अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
समूह एचमा युनाईटेड, पीएसजी र आरबी आईपेजिगको समान ९ अंक भएको छ । अघिल्लो चरण पुग्न तीन वटै टोलीलाई जित निकाल्न आवश्यक छ । ईस्तानबुल ३ अंक सहित तालिकाको पुछारमा छ ।
<<< : स्नातकोत्तर तहको परीक्षा दुई घण्टाको हुने
बलात्कार कसुरमा किशोरलाई १२ वर्ष जेल सजाय : >>>
चेल्सीको मुख्य प्रशिक्षकमा थोमस टुचेल
बर्नलीसँग लिभरपुल हार्‍यो
युभेन्ट्सले जित्यो सुपर कपको उपाधि
बिल्बाओलाई सुपर कप उपाधि, मेस्सीलाई रातो कार्ड
प्रिमियर लिग: लेस्टरले साउथह्याम्टनलाई हरायो
पीएम कप: एपीएफको विजयी सुरुवात
‘कोभिसिल्ड’ खोप अभियान सुरु, पहिलो खोप डा. सागर राजभण्डारीलाई
कांग्रेसद्वारा आन्दोलनको घोषणा, ३० गते देशभर विरोध प्रदर्शन
‘कोभिशिल्ड’ खोप अभियान, कस्ता व्यक्तिले लगाउन हुँदैन ?
गोठीगाउँमा आगलागी, ३० घर जले
डीएसपी सा’बकाे कविता : ‘विक्षिप्त मन’
All rights reserved - © Post Dainik 2021